Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1555
Trafika ala sy biby : manome lesona ny Firenena mikambana
Par Taratra sur 17/02/2016 Economie, NS Malagasy
Mizara ny traikefany amin’ny Malagasy ny manampahaizana iadiana ny trafika ala sy ny biby. Hatreto tokoa, tsy mbola nisy naiditra am-ponja ireo tena voasazy sy atidoha. Tonga eto Madagasikara ny manampahaizana vahiny, George Rios, avy amin’ny Firenena mikambana miady amin’ny herisetra sy ny zava-mahadomelina (ONUDC). Lohahevitra noraisina amin’ny atrikasa natao, omaly teny Ambatobe, ny ady […]
ONU : nodimandry i Boutros-Ghali
Par Taratra sur 17/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nambaran’ny eo anivon’ny filankevi-pilaminan’ny Firenena mikambana (ONU) fa nodimandry, omaly teo amin’ny faha-93 taony ny sekretera jeneralin’ny Firenena mikambana (ONU) teo aloha, Boutros Boutros-Ghali. Nisahana izany andraikitra izany teo anelanelan’ny taona 1992 hatramin’ny 1996 ny tenany. Teratany ejipsianina sady diplaomaty ny tenany ary hany afrikanina nisahana izany andraikitra lehibe izany voalohany teo anivon’ny ONU. Nampiavaka […]
Trafika andramena : naka mpisolovava iraisam-pirenena ny fanjakana
Par Taratra sur 17/02/2016 Divers, NS Malagasy
Nanome fanazavana ny minisitry ny Tontolo iainana, Ralava Beboarimisa, mikasika ireo trafika andramena sy harena voajanahary maro tratra tany ivelany. Vonona hanohana antsika ny fanjakana amerikanina hiadiana amin’ny tambajotra iraisam-pirenena. Efa niasa nanomboka tamin’ny taona 2015 ny kabinetra momba ny lalàna manokana avy any ivelany, miara-miasa amin’ny fanjakana, hijery akaiky ireo antontan-taratasy amin’ireny trafika ireny […]
Paipaika politika fanilihana ny hafa : tsy moramora ny fanitsiana ny lalàmpanorenana
Resaka mandeha… Hisy ihany ve ny fanitsiana ny lalàmpanorenana? Tsy moramora ny raharaha. Mandeha ny resaka ny amin’ny mety hanitsiana ny lalàmpanorenana. Paipaika sy kajikajy politika? Efa natsidiky ny filohan’ny Antenimierandoholona, mpahay lalàna, Rakotomanana Honoré, tamin’ny nandraisany andraikitra fa tokony hisy ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Hanao ahoana? Misy ny mahita fa fomba hanilihan’ny fitondrana izay […]
Fananganana FFM vaovao : mila fivoriana tsy ara-potoan’ny Antenimiera roa tonta
Andrasana ny fiantsoan’ny governemanta ny fivoriana tsy ara-potoana hataon’ny Antenimiera roa tonta, ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona. Izay ny amin’ny fandinihana sy fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny fananganana ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM) amin’ny rafitra sy endrika vaovao. Tapitra amin’ny volana marsa ho avy izao ny fe-potoam-piasan’ny FFM, izay najoro tamin’ny alalan’ny tondrozotra. Efa […]
Par Taratra sur 17/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Efa mandeha ny fifandresen-dahatra mangina eo amin’ireo depiote amin’ny hanolorana ho praiminisitra. Anisan’ny anarana mandehandeha Rajaonary Eric, Paraina Auguste, Horace Constance, Atallah Béatrice… Mikononkonona ny hanao fitsipaham-pitokisana ny goverenamnta koa ireo depiote. Ankoatra izany, mety ho tonga amin’ny fanovana governemanta ny tsy famelana ireo minisitra hivoaka any ivelany. Nambaran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, omaly tao […]
Par Taratra sur 17/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nitohy, omaly indray ny fikarohan’ny mpamonjy voina ny fatin’ilay ankizivavikely 10 taona natelin’ny rano teny Ankadindramamy, ny alahady teo. Efa nampiasana fomban-drazana, nametrahana vatan’akondro teo amin’ny toerana nilatsahan’ilay zaza nefa tsy nisy vokany izany… Efatra andro izay ny nikarohana ny fatin’ity ankizivavikely 10 taona niharam-boina ity, saingy tsy nahitam-bokany izany. Hatramin’ny ora farany nanoratanay […]
Pasitera sandoka : nosoratany tamin’ny anarany ny tanin’ny fiangonana Tocoista
Pasitera iray niala tao amin’ny fiangonana FLMN ao Tanambao ity Pasitera ity ka neken’ny fiangonana Tocoista ao Ampasikibo Avaratra ho mpikambana ao amin’izy ireo. Nitranga ny olana raha nomen’ny fiangonana fahazoan-dalana vonjimaika izy nandritra ny filan’ny fiangonana tany hanorenana trano. Nampiasany ireo taratasy nomena azy ka nosoratany tamin’ny anarany ny tany nanorenana ilay trano fiangonana. […]
Ankizivavikely 10 taona maty voahosin’ny môtô teny Anosibe, omaly antoandro. Voalaza fa nandeha mafy ilay môtô ka nahafaoka tampoka ilay ankizivavikely. Nentina haingana teny amin’ny hopitaly ilay niharam-boina, saingy nitsoaka tampoka teny an-dalana ilay mpitondra môtô nahavanon-doza. Raim-pianakaviana iray hita faty tao anaty taksiborosy iray avy any Toamasina raha hihazo an’Antsirabe, afakomaly. Tsy fantatra marina […]
Maevatanana : taolam-paty 32 kg hitan’ny zandary
Taolam-paty milanja 32 kg saron’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Maevatanana, ny alahady teo tao amin’ny fokontany Andranobevava Antanimbary, distrikan’i Maevatanana. Araka ny fanazavan’ny zandary, raim-pianakaviana iray no tonga nampilaza tao amin’ny sefom-pokontany ao Antanimbary fa nahita taolam-paty marobe ao anaty tatatra, 1 km atsinanan’ny tanàna. Nampilaza tamin’ny zandary avy hatrany ilay sefom-pokontany, nidina teny […]
Betioky Atsimo : tsy ekena ny fanafoanana Dina
Raikitra indray ny fihetsiketsehana nataona andian’olona miisa 12 eo ho eo tao amin’ny distrikan’i Betioky Atsimo, afakomaly. Araka ny fanazavana voaray avy any an-toerana, nahitana ny avy amin’ny ben’ny Tanàna, solontenan’ny Dinabe, raiamandreny, mpitondra resaka izay samy avy ao amin’ny distrikan’i Betioky Atsimo ireo mpanao fihetsiketsehana izay nanatona ny Prefet sy ny lehiben’ny Faritra Atsimo […]
Fakana vato ao anaty ala any Toamasina : tsy nisy ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana
Resabe atsy amin’ny Nosy La Réunion ny mikasika ilay fanorenana arabe manaraka morontsiraka. Niakatra fitsarana ny raharaha amin’ny fanatanterahana azy ary misy tompon’andraikitra atsy La Réunion voarohirohy. Ankoatra izany, mahakasika an’i Madagasikara koa ity raharaha ity satria afarana avy aty amintsika, any Ambokatra Toamasina, ny hakana ireo vato haondrana any La Réunion, akora ilaina amin’ny […]
Madagasikara, ho an’ny Malagasy ?
Par Taratra sur 17/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Izay mihitsy ! Mampihetsi-po sy mamelombelona ny fitiavan-tanindrazana tokoa io hiran’i Naly Rakotofiringa io : … Madagasikara, ho an’ny malagasy… Azo sary an-tsaina ny firedaredan’ny faniriana tao amin’ny mpanoratra, tamin’ny fotoana nanoratany azy. Faniriana lalina ny hahatafita soa ny Malagasy : hiadana sy ho finaritra eo amin’ny tany efa nomen’Andriamanitra azy. Indrisy anefa… Zary lasa fanontaniana io firariana […]
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : mifampatahotra ny Chelsea sy PSG
Par Taratra sur 16/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hifantoka any Eoropa avokoa ny sain’ny rehetra, amin’ity anio ity, eo amin’ny fiatrehana ny lalao mandroso amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa. Anisan’ny lalao andrasan’ny rehetra ny an’ny Chelsea sy ny Paris St Germain. Hanomboka, anio, ny lalao ampahavalon-dalana mandroso, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa na ny «Ligue des champions 2016», taranja baolina kitra. Hisantatra […]
Volley – Mada U18 G/F 2016 : hanomanana ny fiadiana tompondakan’i Afrika U18
Mazava. Ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny volley sokajy U18 zazalahy sy zazavavy no hanokafan’ny federasiona malagasy (FMVB) ny taom-pilalaovana 2016. Araka izany, hotanterahin’ny FMVB, ny 23 – 30 marsa izao, eto Antananarivo io hetsika nasionaly eo amin’ny sokajy zandriny io. Hofantenana mandritra io fifaninanana io ihany koa mantsy ny ekipa nasionaly hiatrika sy […]
Rugby eran-tany : laharana faha-41 ny Makis de Madagascar
Namoaka ny filaharan’ireo firenena mpikambana ao anatiny ny federasiona iraisam-pirenen’ny rugby na ny World rugby, omaly alatsinainy. Eo amin’ny laharana faha-41 no misy ny Makis de Madagascar. Araka ny fanadihadiana, tsy nihetsika tamin’izany toerany izany ny ekipam-pirenena malagasy, izay manana isa 48, 71. Tafiditra ao anatin’ny “Top 50” eran-tany izany ny Makis de Madagascar. Voalohany […]
Basikety – Coupe du Président : afaka ny Challenger, Ascut II sy Cosmos ary ny ABBC
Challenger (Analamanga), Ascut II (Atsinanana), Cosmos (Diana), ABBC (Boeny). Ireo no ekipa tafita hiatrika ny Play-off amin’ny fiadiana ny “Coupe du Président”, taranja basikety. Tontosa ny faran’ny herinandro teo mantsy ny famaranana tamin’ireo Zones roa, Nord tany Antsiranana sy Centre tany Toamasina, rehefa nizotra nandritra ny herinandro. Ho an’ny Zone Nord, niatrika ny famaranana ny […]
Tsy ho ela : hisy fifaninanana DJ hafakely
Par Taratra sur 16/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Tsy mbola fahita! Hotontosaina, amin’ity taona ity, ny fifaninanana DJ izay tsy toy ny fahita hatramin’izay fa hanana ny mampîavaka azy tanteraka. Tsy maintsy mampiasa zavamaneno nentim-paharazana ny mpifaninana, araka ny nambaran’ny tompon-kevitra amin’ity hetsika ity, i Willy na DJ B1, DJ Malagasy efa fanta-daza hatrany ivelany any. Araka izany, hanerana an’i Madagasikara ny fifaninanana […]
« Taom-baovao malagasy » : hankalaza koa ny any Kanada, Frantsa…
Nampahafantarina, omaly, tao amin’ny Radama Hôtel Antaninarenina, fa ny 9 marsa hifoha 10 marsa izao ny fankalazana ny « Taom-baovao malagasy ». Raha ny teto an-toerana ihany no nankalaza izany hatramin’izay, nivelatra izany, raha ny fanazavan’ny komity mpikarakara. Hankalaza koa ny Malagasy monina any Frantsa, Etazonia, Kanada, La Réunion. Hisy olona avy aty Madagasikara hanatrika ny hetsika […]
Saripika : ho fanentanana ny “Alao sary”
Par Taratra sur 16/02/2016 Divers, NS Malagasy
Fitaovana iray mahomby amin’ny fanentanana ny saripika. Antony iray nikarakaran’ireo mpankafy ny sary ny hetsika “Alao sary” izany. Haka endrika “marathon photo”, toy ny efa fahita any ivelany izy ity, ka hetsika telo goavana aloha no kasaina hotontosaina amin’ity andiany voalohany ity. Mandritra ny tontolo andron’ny 19 marsa izao ny voalohany, izay natao hakana sary […]
Vonjy aina : orinasa faha-151 manome ra ny DHL
Par Taratra sur 16/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Orinasa faha-151 manome ra an-tsitrapo ny foibe fitehirizana ra eny amin’ny HJRA ny DHL Madagascar, omaly. Tafiditra amin’ny sehatra Go help ny fanomezana ra maimaimpoana hamonjena aina, izay notarihin’ny tale jeneralin’ny orinasa, Rakotondraibe Mamy. Hetsika fisantarana ny omaly ary nandraisan’ny olona maro anjara amin’ireo mpiasa 170 eto Antananarivo. Natao mifanandrify amin’ny fanamarihina ny andron’ny fitiavana […]
Tsy mahakasika antsika ilay rivodoza : misy fampitandremana amin’ny fiakaran’ny rano
Nahazo fampitandremana (loko maitso) amin’ny mety ho fiakaran’ny rano ireo lemaka lalovan’ny renirano Sisaony, omaly maraina. Tafiditra amin’izany ny kaominina maromaro eto Antananarivo sy ny manodidina : Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe. Momba ny haavon’ny rano, 1,00 m ny haavon’Ikopa eo amin’ny maridrefin’Anosizato. Niakatra 0,40 m ny rano […]
Fakafaka : mba ho iray ihany izy roa ireo !
Matetika, any amin’ny tontolon’ny fitiavana no andrenesana io fomba fiteny io. Azo atao tsara anefa ny mindrana izany manoloana ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny fanondroana marina izay tena andro voalohany amin’ny fanisan-taona malagasy. Ireo fombafomba atao, toa tsy mifanalavitra, fa ny fotoana mihitsy no mifanipaka. Raha tiana hatanjaka tsara ny fipakan’ny kolontsaina tahaka itony any […]
Laharana faha-159 i Madagasika : mbola vitsy ny ankizy sahy miakatra eny amin’ny fitsarana
Raha ny fikarohana nataon’ny Child Right International Network (CRIN), eo amin’ny laharana faha-159 i Madagasikara amin’ny fanomezana sehatra ny ankizy hitondra ny raharaha nianjady aminy manoloana ny fitsarana. Anisan’ny antony mahatonga izany ny tsy fahafantaran’ny ankizy ny zony. Eo koa ny tsy fahampian’ny torolalana ahafahan’izy ireo manatanteraka izany. Ankoatra izany ny fisokajiana ny raharaham-pitsarana ho […]
Minisiteran’ny Varotra : namboly zanakazo 1.000
Toy ny fanaony isan-taona, namboly hazo teny Ambatomirahavavy ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana, ny zoma 12 febroary teo. Novolena tamin’io fotoana io ny zana-kazo kesika sy acacia 1.000 fototra, notarihin’ny minisitra Rabesahala Henri niaraka tamin’ny mpiasa 450. Nanotrona teny koa ny sampandraharaha eo ambany fiahin’ny minisitera, toy ny Biraon’ny fenitra eto Madagasikara (BNM), ny […]
« Précédent 1 … 1 553 1 554 1 555 1 556 1 557 … 1 596 Suivant »